D Day ကွညောအပွီး ရနျကုနျမှာ ပဈခတျမှုမြားနှငျ့ လကျရှိရနျကုနျအခွအေနမြေား - Voice Of Burma
D Day ကွညောအပွီး ရနျကုနျမှာ ပဈခတျမှုမြားနှငျ့ လကျရှိရနျကုနျအခွအေနမြေား
D Day ကြေညာအပြီး ရန်ကုန်မှာ ပစ်ခတ်မှုများနှင့် လက်ရှိရန်ကုန်အခြေအနေများ
NUGအစိုးရမှ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရုံးပိတ်ရက်အကန့်အသတ်မရှိကြေငြာပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအချို့ လစာအပြည့်ဖြင့်ရုံးပိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်…….
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ-NUGက ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၇ ရက်) မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံအား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာခဲ့ပြီး ရက်အကန့် အသတ်မရှိရုံးပိတ်ရက်ကြေငြာပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီအချို့မှ ၄င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား လစာအပြည့်ဖြင့် ရုံးပိတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်……..
အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာသည့် ယနေ့မနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဝန်ထမ်းများအားလုံးပြန်လွှတ် လိုက်ပြီး ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပြီး အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရုံးပြန်တက်ရ မည့်ရက်အား ပြန်လည်ဆက်သွယ်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်……
ဒီမနက်ကစပြီး D-Dayဆိုတော့ ညီမတို့ရုံးက ပိတ်ပေးလိုက်တယ်
ဘယ်နေ့ပြန်တက်ရမယ်ဆိုတာမပြောဘူး”ဟုရန်ကုန်မြို့ ဆေး ကုမ္ပဏီတခု၏ဝန်ထမ်းတဦးက ဧရာဝတီတိုင်းမ်သို့ ပြောသည်……..
NUGအစိုးရအနေဖြင့် ယနေ့အား D-Day အရေးပေါ် အခြေအနေအဖြစ်ကြေငြာပြီးနောက် မြို့ နယ်အချို့တွင် ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်…….
ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအများ
စုအနေဖြင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးများ စုဆောင်းဝယ်ယူမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်……
NUGအစိုးရမှ အရေးပျေါအခွအေနနှေငျ့ ရုံးပိတျရကျအကနျ့အသတျမရှိကွငွောပွီးနောကျ ရနျကုနျမွို့ ပုဂ်ဂလိကကုမ်ပဏီအခြို့ လစာအပွညျ့ဖွငျ့ရုံးပိတျပေးလိုကျပါတယျ…….
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ-NUGက ယနေ့ (စကျတငျဘာ ၇ ရကျ) မှစတငျ၍ မွနျမာနိုငျငံအား အရေးပျေါအခွအေနကွေငွောခဲ့ပွီး ရကျအကနျ့ အသတျမရှိရုံးပိတျရကျကွငွောပွီးနောကျ ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီအခြို့မှ ၎င်းငျးတို့၏ ဝနျထမျးမြားအား လစာအပွညျ့ဖွငျ့ ရုံးပိတျပေးလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ……..
အရေးပျေါအခွအေနကွေငွောသညျ့ ယနမေ့နကျပိုငျးမှစတငျ၍ ဝနျထမျးမြားအားလုံးပွနျလှတျ လိုကျပွီး ရကျအကနျ့အသတျမရှိပိတျထားမညျ ဖွဈပွီး အခွအေနပေျေါမူတညျ၍ ရုံးပွနျတကျရ မညျ့ရကျအား ပွနျလညျဆကျသှယျမညျဖွဈ ကွောငျး သိရသညျ……
ဒီမနကျကစပွီး D-Dayဆိုတော့ ညီမတို့ရုံးက ပိတျပေးလိုကျတယျ
ဘယျနပွေ့နျတကျရမယျဆိုတာမပွောဘူး”ဟုရနျကုနျမွို့ ဆေး ကုမ်ပဏီတခု၏ဝနျထမျးတဦးက ဧရာဝတီတိုငျးမျသို့ ပွောသညျ……..
NUGအစိုးရအနဖွေငျ့ ယနအေ့ား D-Day အရေးပျေါ အခွအေနအေဖွဈကွငွောပွီးနောကျ မွို့ နယျအခြို့တှငျ ပဈခတျမှုမြားဖွဈပှားနကွေောငျး သိရသညျ…….
ထို့ပွငျ ရနျကုနျမွို့အတှငျးရှိ ပွညျသူလူထုအမြား
စုအနဖွေငျ့ အခွခေံစားသောကျကုနျနှငျ့ ဆေးဝါးမြား စုဆောငျးဝယျယူမှုမြား ရှိနကွေောငျး သိရသညျ……
တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ PDF အယောကျ ၁၀၀ ခနျ့သာကနျြတော့ကွောငျးတပျတှငျး….